समूह ‘सी’ फ्रान्सलाई सजिलो समूह - खेलकुद - साप्ताहिक
समूह ‘सी’ फ्रान्सलाई सजिलो समूह
यो समूहको सटीक विश्लेषण गर्ने हो भने नकआउट चरण प्रवेशका लागि फ्रान्सले निकै सजिलो समूह पाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यसै पनि रुसी भूमिमा पहिलो पटक हुन लागेको विश्वकपमा फ्रान्स उपाधिको बलियो दावेदार हो । त्यसका स्पष्ट कारण पनि छन् । फ्रान्स युरोपमा भएका पछिल्ला दुई विश्वकपमा फाइनलसम्म पुगेको छ । त्यसमध्ये सन् १९९८ मा आफ्नै भूमिमा भएको विश्वकपमा फ्रान्स नै विजयी भएको थियो ।
सन् २००६ मा भने फ्रान्स इटालीविरुद्ध फाइनलमा पेनाल्टीमा पराजित भयो । ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा खराव खेलेको फ्रान्स अहिले फेरि लयमा छ र टिममा एकतासमेत देखिन्छ । त्यसैले हो, सन् २०१६ को युरोमा फ्रान्स फेरि एक पटक फाइनलमा पुगेको थियो । त्यसमा फ्रान्स पोर्चुगलको हातबाट पराजित भयो । फ्रान्स प्रशिक्षक डिडिएर डेसक्याम्पको नेतृत्वमा छ र उनी प्रशिक्षकका रूपमा लगातार तेस्रो पटक विश्वकपमा सहभागी हुँदैछन् ।
फ्रान्सेली टिममा अहिलेको फुटबलका तीन स्टार खेलाडी छन्, पउल पोग्बा, एन्टोनिया ग्रिजमन र केलिन एमबापे । यी तीनै खेलाडीले युरोपेली क्लब फुटबलमा तहल्का मच्चाइरहेका छन्, त्यसैले पनि फ्रान्सले अबको विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, कम्तीमा फ्रान्सले सजिलै समूह चरण काट्नेछ । त्यसो भए, प्रारम्भिक लिग चरणमा फ्रान्सलाई चुनौती दिने को होला त ? अथवा फ्रान्सपछि नकआउट चरणमा पुग्ने दोस्रो टिम कुन हुनेछ ?
सम्भवत: यसको उत्तर डेनमार्क हुन सक्छ । सन् १९९८ मा फ्रान्सले डेनमार्कलाई हराएको थियो, तर त्यसको चार वर्षपछि फ्रान्स डेनमार्ककै हातबाट पराजित भएर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । यस्तोमा डेनमार्क फ्रान्सका लागि सधैं बलियो चुनौती मानिँदै आएको छ । फ्रान्स र डेनमार्कबीचको खेलले समूहको स्थिति धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ । खासमा यी दुई टिम एक आपसमा निकै परिचित छन् ।
अष्ट्रेलिया अहिलेको एसियाली च्याम्पियन हो, तर उसका लागि पछिल्लो समय राम्रो हुन सकेको छैन । त्यसमाथि अष्ट्रेलियाको छनौट यात्रा पनि सहज रहेन । छनौटका लागि अष्ट्रेलियाले अन्तरमहादेशीय प्ले अफ खेल्नुपरेको थियो । टिममा विवादबीच नै प्रशिक्षक एन्गे पोस्टकोग्लुले आफ्नो पद छाडेका छन् । अहिले तत्काल टिम प्रशिक्षकविहीन छ । यसको सीधा प्रभाव विश्वकपमा देखिनेछ, तर टिममा राम्रा खेलाडीको कमी भने छैन ।
पेरुले पनि सन् १९८२ यता पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको छ र उसका लागि आउने विश्वकप ३२ वर्षपछिको पहिलो ठूलो प्रतियोगिता हुनेछ । यसपटकको विश्वकपमा सहभागी टिममध्ये पेरुको सहभागिताको अन्तर सबैभन्दा ठूलो हो । त्यसैले पनि पेरुबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन, तर रमाइलो तथ्य के छ भने सन् १९८२ को विश्वकपमा पनि फ्रान्स र पेरु आपसमा भिडेका थिए र उक्त खेलमा दक्षिण अमेरिकी टिम विजयी भएको थियो । फ्रान्स र पेरु भिड्दा उक्त इतिहास सम्झेर स्तब्धपूर्ण नतिजाको अपेक्षा भने गरिनेछ ।
जुन १६ फ्रान्स–अष्ट्रेलिया
जुन १६ पेरु–डेनमार्क
जुन २१ फ्रान्स–पेरु
जुन २१ डेनमार्क–अष्ट्रेलिया
जुन २६ डेनमार्क–फ्रान्स
जुन २६ अष्ट्रेलिया–पेरु
स्मृतिका लागि घुम्ती रंगमञ्च भ्रमण
टर्टल लाउन्जमा राजु लामा
लिगको अनन्त दाउ माघ ६, २०७५